KALLUUMEYSIGA RODENT: NOOCYADA, ULTRASOUND, QALABKA UGU FIICAN EE JEEXJEEXA JIIRKA IYO JIIRKA - XAKAMAYNTA CAYAYAANKA
Badbaadinta iyo ka hortag ah oo waxtar leh oo looga hortagayo khatarta jiirka iyo jiirka ayaa ah kuwa casriga ah, kuwa isdaba-joogta ah. Si aad u isticmaasho walxaha sunta ah ujeedada ah in la ciribtiro cayayaanka waa khatar, iyo daaweynta dadku had iyo jeer ma shaqeeyaan. Qalabka ugu dambeeya ee ultrasonic iyo electromagnetic ayaa si dhakhso ah u shaqeeya. Taasoo ka fiican in la doorto - aynu aragno.
Mice iyo cheles waa cayayaanka ugu caansan iyo dhibaatooyinka caanka ah ee ka muuqan kara meel kasta oo ay dadku ku nool yihiin: guri, guryo gaar ah, aqallo, xafiisyo, dhismayaal warshad, iwm.
Cayayaanka oo keliya ma cunaan cunto, laakiin waxay sidoo kale keeni karaan dhibaatooyin badan oo ay ka cabsi badan yihiin: in ay qaniinto alaabtu, si ay u burburiso walxaha qurxinta ama xitaa si ay u daadiyaan qalabka korontada, taas oo horseedi karta wareegga gaaban iyo dabka.
Jiiraan qolalka qolalka waxay u muuqdaan sabab, laakiin dhowr sababood oo waaweyn:
Cuntada Sababta ugu weyn ee muuqaalka cayayaanka waa joogitaanka guriga cuntada lagu keydiyo baakadaha xoolaha si fudud u gaari karo. Inta badan wax walba waxay ka hadlaysaa alaabooyinka buluugga ah: miraha, lowska, badarka, kuwaas oo lagu keydiyay meelo fudud.
Warmly Dhibaatada kacdoonta jiirka ayaa noqota mid degdeg ah xilliga qaboobaha marka ay tahay in ay magan-gelyo ka raadsadaan baraf, dabayl, roob iyo dhaxan. Waa guryo, qolal iyo qolal diimeed oo kale oo noqda deegaankooda.
Ku xad-gudubka heerarka caafimaadka. Haddii qolka la buuxiyo qashinka, waxyaabihii hore, nadiifinta nidaamka nadiifinta laguma sameyn karo, ka dibna ugu dhakhsaha badan ayaa u awoodi doona inay u adeegaan sida habeenkii jiirka iyo jiirarka.
Ma taqaanaa? Fareemku wax yar ayay cabbaan, xitaa helitaanka biyaha, sababtoo ah waxay awoodaan inay helaan biyo sababtoo ah burburka carbohydrateska ee jirka.
Jiiraantu waxay inta badan ku dhacaan meelaha ay awood u leeyihiin inay u guuraan una quudiyaan si xor ah. Meelaha noocan oo kale ah ee xagaaga waa goobaha kaydinta iyo goobaha kaydinta. Guryaha iyo dhismayaasha guryaha ayaa ka muuqda:
markaad wax ka soo qaadato guryaha kale ama goobaha kale;
ka baxa deriska;
inta lagu jiro iibsashada alaabada waaweyn ee baakadka waaweyn.
Si kastaba ha noqotee, muuqaalka jiirka ee guriga waa in laga hortago, laakiin haddii ay hore u degeen, markaa waxaa lagama maarmaan ah in la isla markiiba qaado tallaabooyin si looga eryo. Mid ka mid ah habka ugu fiican ee eco-saaxiibtinimo ee la dagaallanka cayayaanka ayaa ah kuwa soo celiya khaas ah.
In kabadan hal qarni, dhirta noocan oo kale ah sida xidid madow ayaa loo isticmaalay inay la dagaallanto jiirka.
Casriga casriga ah waxaa lagu abuuraa iyada oo la adeegsanayo tiknooloojiyad gaar ah oo aan ku burburin cayayaanka, laakiin waxay ku cabsiineysaa iyaga oo isticmaalaya mawjadaha ultrasonic ama mawjadaha electromagnetic. Waa kan dambe ee go'aamiya nooca qalabka: wuxuu ku shaqeynayaa ultrasound ama guriga
Kacbada Ultrasonic waa unug kuwa saameeya nidaamka dareemayaasha ee jiirka oo leh caawimaad ah ultrasonic xajmiga badan ee isku-dhafan., taas oo abuuraysa xaalado aan raaxo lahayn xayawaanka, taas oo ah natiijada ay doonayaan inay si deg deg ah uga baxsadaan dhulkan. Sidaa daraadeed jiirarka iyo jiirka ma awoodi karo in ay la qabsadaan oo la qabsadaan qalabka, inta jeer ee wareegga qashinka ah waxay u dhexeeyaan 20 ilaa 70 kHz. Saacadaha ugu horreeya ee qaliinka qalabka, cayayaanka ayaa waaya jihayntooda iyo kartida ay kula xiriiri karaan qaraabadooda, waxay la qabsadeen cabsi iyo argagax, taas oo ay sabab u tahay in ay bilaabaan inay si weyn uga baxaan hoygooda si ay u raadiyaan hab ka baxsan. Waa in la ogaadaa in cutubku uusan khatar u ahayn jiirka iyo jiirarka, waxa kaliya oo uu abuuraa jawi taas oo ay noqoto mid aan raaxo lahayn.
Mabda'a ku shaqeynta dib u habeeynayaasha korontada ku shaqeeya waxay ka kooban yihiin jiilka qalabka isgaadhsiinta ee qalabka korontada, kuwaas oo lagu gudbiyo xadhkaha korantada ee hal mitir koronto. Dareemaha noocan oo kale ah waxay saameyn xun ku yeeshaan cayayaanka, nidaamka dareemayaasha, waxayna ku qasbi karaan inay ka baxaan aagagga beerta. Xaqiiqo xiiso leh ayaa ah in saacadaha ugu horreeya ee qalabka qalabka, waxaa jira koror xoog leh ee tirada jiirka. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah mawjadaha qalabku ku faafiyo darbiyada, inta u dhaxaysa dabaqyada la taaban karo, taas oo keenaysa jiirka inay ka baxaan beertooda, hoygooda, iyo si firfircoon u raadsadaan jidka.
Waa muhiim! Waa mamnuuc in la isticmaalo boogaha leh noocyo kale oo xabo ama dabagal. Haddii aad si joogta ah u ciribtirto oo aad uga cabsiiso cayayaanka, ka dib hawlgalka labada qalabba waxay noqon doontaa mid waxtar leh.
Ultrasonic iyo kuwa loo yaqaan electromagnetic repellers waxay leeyihiin labadaba faa'iidooyinkooda iyo faa'iidooyinkooda. Qalabka wax soo saarku, oo falanqeeyay sifooyinka, qalab la isku daray oo la sameeyey oo ka kooban qaybo ka mid ah qaybo ka mid ah qaar ka mid ah oo ku daboolay fiilooyinka kuwa kale. Dib-u-soo-celiyaha guud waa mid guud, waxaa loo isticmaali karaa goob kastaWaxay isku daraan laba saameynood: beerta korontada oo leh xaddiga 14-26 mA iyo qulqulka sare ee ultrasonic ultrasonic.
First of dhan, si loola dagaallamo jiirka, waa inaad ka saarto dhamaan siyaabaha suurtogalka ah ee cuntada la heli karo. Waxaa lagula talinayaa in alaabta badeecada ku jirta weelka si adag u xiran, ha u isticmaalin bacaha balaastikada loogu talagalay. Sidoo kale waxay khuseysaa alaabooyinka ku jira santuuqa: waxay u baahan yihiin in loo wareejiyo weelasha ay adagtahay in ay helaan cayayaanka.
Waxaa jira siyaabo dhowr ah oo looga takhaluso jiirka iyo jiirarka:
Jireed Goobo kala duwan, dabin, dabagal farsamo ayaa loo gudbiyaa hababka jireed. Waxay kugula talinayaan burburinta jiirka jilicsan iyaga oo ku xiri doona. Qalabka noocan oo kale ah waxay ku yaalliin goobaha dhaqdhaqaaqa xayawaanka. Habkani waa mid sahlan, raqiis ah, laakiin had iyo jeer ma shaqeynayo, gaar ahaan haddii aad rabto inaad ka takhalusatid wax ka badan hal cayayaan.
Kiimikada Habkani wuxuu ku lug leeyahay isticmaalka kiimikada sunta ah, sunta sunta, laakiin looma dhaqmi karo haddii guriga uu ku noolyahay ilmo yar, iyo sidoo kale xayawaanka nool. Kiimikooyinka ayaa leh saameyn dheeraad ah oo la taaban karo marka la eego jir ahaan, laakiin bay'ad ahaan khatar u ah caafimaadka bani'aadamka iyo deegaanka.
Habka kiimikada ee dilka jiirka ayaa ku lug leh isticmaalka rodenticides.
Cabaarayaasha. Haddii labada dariiqadood ee hore ay ku saleysneyd dilka cayayaanka, markaa caarada ayaa waxyeello u geysanaysa jirkooda jireed, ayna si gaar ah ugu dhaqmaan nidaamka dareenka. Iyada oo loo marayo calaamadaha ultrasound ama electromagnetic, wadajirta waxay ku dhaqmaan jiirka iyo jiirarka, ku qasbaya inay ka baxaan deegaankooda.
Rodent Ultrasonic Repeller
Badeecadaha, ku shaqeynaya saldhigga ultrasound, waxay leeyihiin qaababka soo socda:
Waa ammaan, waxaa loo isticmaali karaa nooc kasta oo dhismo ah, oo ay ku jiraan qolalka fadhiga, isbitaalada, xafiisyada, bakhaarada, xarumaha wax iibsiga, iwm.
Hirarka Ultrasonic ma geli karo darbiyada iyo dabaqa, sidaa daraadeed, si loo ciribtiro cayayaanka, qalab gaar ah waa in lagu rakibaa qol kasta;
Ultrasound wuxuu si fiican uga muuqdaa xarumo adag, laakiin waxaa si fiican u nuugay waxyaabo jilicsan - kareem, daahyo, barkimo. Si loo xakameeyo xakamaynta jiirka jilicsan, kumbiyuutarka ayaa sida ugu wanaagsan loo isticmaali karaa dhulka ugu madadaashan;
ka dib markii cayayaanka ay ka baxeen dhismaha, qalabku waa in la demiyaa, maxaa yeelay waxaa loogu talagalay inuu ka cabsiiyo jiirka, oo aan ka ilaalin iyaga.
Ka dib 2-3 toddobaad ee qalabka qalabka, waxaad si buuxda uga takhalusi kartaa jiirka. Haddii dadka cayayaanku ay aad u badan yihiin, markaa waxay qaadan doontaa ilaa 2-3 bilood.
Ma taqaanaa? Kalluumeysiga waa jeexjir aan awoodi karin, sababtoo ah waxay jarjarayaashu yihiin kuwo aad u tabar daran, oo la gooyo. Waxay quudineysaa qoyaanka iyo qashinka miraha.
Faafinta ultrasound ee qolka
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee cutubyada ultrasonic waa:
Saaxiibtinimo heer sare ah oo aan khatar u lahayn bini-aadanimada, xayawaanka guriga iyo deegaanka;
suurtagalnimada shaqo joogto ah;
saameynta cayayaanka duulaya;
fududeyn iyo sahlan isticmaalka.
Intaas waxaa dheer, qalabka ultrasound waxay leeyihiin dhibcoodkooda:
waxtarka qalabka ayaa la yareeyey qolka leh tiro badan oo dhar ah, qalabka qurxinta jilicsan;
baahida loo qabo in la isticmaalo qol walba qol gaar ah.
Qalabka elektromagnetic-ga ayaa dhaliya xargaha marka la fiilo. Xaaladdan oo kale, waxaa loo isticmaalaa koronto-ku-fiiqan-hoosaad badan, taas oo ka dhigaysa raaxo-darro qashinka ah ee jiirka, taasoo keenta inay ka baxaan qolka.
Si aad uga takhalustid jiirka guryaha gaarka loo leeyahay, waxaad isticmaali kartaa dabin guri.
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee daawooyinka korontada dhaliya ayaa ah:
badbaadada iyo badbaadada caafimaadka dadka. Saliida korontada waxay abuurtaa xaalad aan caadi aheyn jiirarka, waxay gacan ka geystaan ​​koritaanka argagaxa iyo walbahaarka, kicinta hoos u dhaca rabitaanka cuntada iyo awood la'aanta, isla mar ahaantaasna wax saameyn ah kuma yeelan bini'aadamka iyo xayawaanka rabaayadda;
maqnaanshaha kiimikooyinka waxyeellada leh;
cirifka aadka u ballaaran ee caymiska - illaa 200 mitir oo laba jibbaaran. mitir;
wax saameyn ah kuma laha hawlaha qalabka guryaha;
suurtogalnimada ah in laga takhaluso cayayaanka ku jira hulalka saqafyada iyo derbiyada. Kaliya dhismo biraha ah ayaa ka hortagaya in gawaarida la gooyo;
xawaaraha ficilka. Laba toddobaad ka dib ayaa cayayaanka si firfircoon uga baxaya dhismaha.
Qalabka kaliya ee qalabkaas oo kale waa baahida loo qabo tiknoolajiyad tayo sare leh, taas oo socon doonta wareegga wareegga qolka, ama ugu yaraan hal darbiyada ugu dheer.
Qalabka isku dhafan
Dareemayaasha isku dhafan waa aaladaha cusub, ficilka kaas oo loogu talagalay jilitaanka jiirka, jiirarka iyo cayayaanka iyada oo loo marayo isticmaalka ultreslayaasha ultrasonic oo lagu daro hirarka electromagnetic.
Waxaa ka mid ah faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee qalabkaas waxaa ka mid ah:
xawaaraha ficilka, tan iyo saameeynta labada ilo ayaa caqabad ku ah in la qabsashada cayayaanka, taasoo keenta in ay ka baxaan qolka;
guud ahaan isticmaalka. Qalabka isku dhafan ayaa si isku mid ah waxtar u leh qolalka noocyada kala duwan: Guryaha, Gawaarida, Gubashada, Bakhaarada, Maqaarada, iwm.
Ma taqaanaa? Celcelis ahaan laba jiir qof kasta oo ka mid ah meeraha adduunka.
Dhibaatooyinka dhererka ah, waxaa suurtagal ah in la xuso kharashka sarreeya marka loo eego labada nooc ee hore, si kastaba ha ahaatee, waxay suurtogal u tahay in laga takhaluso dhibaatada sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, oo sidaas darteed badbaadiyo nerves iyo caafimaadka qofka.
Doorashada jaangoynta, hubi inaad ku tiirsan tahay ra'yiga xirfadlayaasha iyo baahidooda. Shuruudaha xulashada waa:
Nooca dhismaha. Haddii aad doorato kambuutar qolka alaabooyinka la keydiyo, ka dibna waa inaad doorbidaa qaababka isku dhafan. Ultrasonic ama electromagnetic ma awoodi doonto inay si dhakhso ah uga takhalusaan dhibaatada.
Joogitaanka xayawaanka. Qalabku ma laha saameyn xun dadka guryaha leh (eeyaha, bisadaha), si kastaba ha ahaatee, xayawaanka yaryar, sida hamigers ama doofaarka guinea, waxay sababi karaan walaac, argagax iyo cabsi. Xaaladaha noocaas ah, waxaa lagu talinayaa in ay xayawaanka oo dhan ka soocaan qolka inta lagu jiro hawlgalka.
Astaamaha Ultrasound. Isbedelka isbeddelka. Markuu yahay khidmadda ama xulashada qaab. Ugu dambeyntii waa la doorbidi karaa maadaama ay suurtagal tahay in la dejiyo oo la badiyo inta jeer ee hirarka, taas oo ka fogaato habeynista xoolaha illaa shucaac. Xagasha faafinta calaamadaha. Gaar ahaan xagasha, dhulalka intiisa badani waxay awoodi doonaan inay daboolaan qalabka. Qiyaasta isbeddelka Ugu fiican waa 20 ilaa 70 kHz.
Aagga qolka. Awoodda jaangooyuhu waxay si toos ah ugu xirnaan doontaa aagga qolka: inta badan, qalabka awoodda badan ayaa loo baahan yahay.
Waa muhiim! Tilmaamaha loogu talagalay soo-jeedinta ayaa tilmaamaya aagga qolka madhan. Sidaa daraadeed, mid waa in uu tixgeliyaa heerarka wax-ka-sheegashada waxyaabaha, alaabta, iyo walxaha qurxinta xafiis ama guri. Qaybtu waxay leedahay waxtarka ugu sarreeya qolalka madhaxda ama qolka madhan.
Dib u eegida sare
Maanta, shirkadaha wax soo saarka waxay ku siiyaan maqaayad waawayn oo ka mid ah jilbaha kuwaas oo ku kala duwan awood, kala duwan, iwm. Waxaanu kuugu soo bandhigeynaa dib u eegis ku saabsan qalabyo dhowr ah oo laga helay macaamiisha.
Tafsiir. Mid ka mid ah doorashooyinka miisaaniyadda loogu talagalay soo-jeedinta ultrasonic, taas oo ku habboon goobaha dhexdhexaadka ah.
Waa faa'iido leh in la ogaado waxa macnaheedu yahay inaad ka takhalusi karto jadeecada dalka.
Waxaa loo isticmaalaa dhismayaasha degaanka, guryaha, warshadaha warshadaha, xafiisyada. Tifaftiruhu wuxuu leeyahay sifooyinka soo socda:
Saamaynta shucaaca: ilaa 90 kHz;
aagga ficilka: illaa 200 mitir oo laba jibbaaran. m;
shaqeynaya: laga bilaabo shabakad ama ka soo uruuriyaha;
Heerkulka: awood u leh inuu ka shaqeeyo heerkul ka yimid -15 ilaa + 45 digrii.
Qalabku waa sahlan yahay inuu isticmaalo, wuxuu leeyahay qiyaasta isku dhafan, qiimaha hooseeya, wuxuu ku shaqeyn karaa laba nooc: aamusnaan - waxaa lagu daraa dhismayaasha ay dadku ku nool yihiin, iyo sanqadha - loo isticmaalo bakhaarada, dukaamada wax soo saarka.
Waa muhiim! Faa'iidada ugu weyn "Typhoon" waxaa loo tixgeliyaa joogitaanka mikro-socodka, kaas oo kuu ogolaanaya inaad si joogto ah u bedesho joogsiga iyo mudada calaamadaha, taas oo ka hortagaysa is-beddelka cayayaanka.
"Grad". Qalabka farsamaysan ee "Multifunctional ultrasound", taas oo lagu gartaa adeegsiga qaabka loo isticmaalo, maadaama ay u ogolaatay in laga cabsado oo kaliya jiirka iyo jiirka, laakiin sidoo kale cayayaanka kala duwan. Qalabka wuxuu awoodaa in uu ka shaqeeyo heerkulka hooseeya iyo heerkulka sare, sidaas darteed waxaa loo isticmaali karaa nooc kasta oo ah dhismo: meelo aan deganeyn, bakhaarro, garaash, garoomo. Faa'iidooyinka "Grad":
maqal la'aanta shaqada;
tiro badan oo soo-gaadhis ah - ilaa 550 mitir oo laba jibbaaran. M. Waxaa jira noocyo kala duwan oo leh ilaa 1000 mitir oo labajibbaaran. m;
Wuxuu ka shaqeeyaa afar nooc: aamusnaan, ugu badnaan ka hortaga jiirka, kaneecada iyo cayayaanka yaryar.
"Grad" waxaa loo isticmaali karaa meelaha aan lahayn fiilo koronto. Xaaladaha noocaas ah, kambanigu wuxuu ku xiran yahay batoonka gaariga.
"Elektrokot". Qalabka, oo laga soo saaro Ruushka, ayaa ku habboon guryaha iyo xafiisyada. Aagga daboolka qalabka waa 200 mitir oo laba jibbaaran. M: Waxaa awood u leh inuu ka shaqeeyo shabakada ama ilaha awoodda madaxbanaan. Loo adeegsado laba nooc: "maalin" iyo "habeen". Habka Habeenkii, marka lagu daro signalka ultrasound, qalabku wuxuu soo saaraa cod xoog leh, xoog leh oo cabsi leh, taas oo si weyn u kordhisa waxtarkeeda iyaga oo la dagaallamaya. Si kastaba ha ahaatee, kiiskan, joogitaanka qolka qolka waa mid aan la aqbali karin. Electokot si gebi ahaanba halis u ah dadka iyo xayawaanka raba, laakiin inta lagu jiro howlgalka waxay ka fiican tahay in laga saaro xayawaanka iyo doofaarrada guinea qolka.
Chiston. Qaybta iswada leh, qayb badan oo farsamo oo yareyn kara hawlaha jiirka ee dhismaha ilaa 500 mitir oo laba jibbaaran. Faa'iidada ugu weyni waxay tahay joogitaanka hawlaha shucaaca qaybta ah ee hirarka, taas oo suurtagelinaysa in la kordhiyo waxtarnimada ficilka. Qalabka ayaa sidoo kale leh xagal aad u ballaadhan - 360 darajo iyo mowjado badan oo kala duwan - 20-70 kHz. Ka mid ah cilladaha, dadka isticmaala xusuusta qaar ka mid ah cilladaha.
Haddii aad wali door bidayso hababka dhaqanka ee xakamaynta jiirka, waxaan kugula talineynaa inaad barato sida loo sameeyo mousetrap gacmahaaga.
Riddex plus. Faa'iidada ugu weyn ee qalabku waa farsamoyin, maxaa yeelay waxaa loo habeeyey in ay ka shaqeeyaan nooc kasta oo ka mid ah dhismayaasha: qolalka fadhiga, garaashka, daboolka. Sidoo kale, cutubku wuxuu awood u leeyahay in uu ka shaqeeyo xaalad kasta oo heerkulka, laga bilaabo -30 ilaa + 45 digrii, iyo tilmaam kasta oo qoyaan ah - laga bilaabo 20% ilaa 90%. Dabeecadda ugu muhiimsan ee jaangooyuhu waa in ay awood u leedahay in ay ilaaliso dhulka oo dhan iyadoo loo eegayo qaabka hal xiraha kaliya. Qalabku waa mid caqli-gal ah, amaan ah, midab-kala-duwan, oo sahlan in la shaqeeyo. EMR-21. A la isku halayn karo oo tayo sarre leh, oo lagu qalabeeyo iftiinka iftiinka, waxay ku dhaqmeysaa jiirka iyadoo la saarayo hirarka electromagnetic. Hal qalab ayaa ku filan in laga takhaluso qolalka cayayaanka ilaa 230 mitir oo laba jibbaaran. m. Cabbirka is-gabbaadku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad isticmaasho qalabka qol kasta, adigu ah guri degaan, xafiis ama bakhaar. Khibrada hawlgalka ayaa muujisay in laba toddobaad ka dib, jiirka iyo jiirarka ay ka soo baxayaan dhismaha. Dijital. Miisaaniyadda miisaaniyadda ee China, oo leh sifooyin caddaalad ah. Qalabku waa amaan in la isticmaalo, dhib la'aan haweenka uurka leh iyo carruurta, ma saameynayaan howlaha qalabka korontada kale.
Qalabeyaha Digitaalka Dhejiyaha:
hawlaha shabakada: 220 V;
hawlgal joogto ah, lacag la'aan lagamaarmaan;
qalabeysan leh lamps habeenkii;
saameynta waxaa lagu gaarayaa 2 toddobaad kadib.
Baro sida looga takhaluso saxanka dillaacsan iyo dharbaaxada dacha.
Marka lagu daro jiirka iyo jiirarka, cutubkani wuxuu ka takhalusi karaa baranbarada, kaneecada, caarada, sariiraha, noocyo kala duwan.
ZF-830E. Tikidhada isku dhafan ayaa loo isticmaali karaa meel kasta oo la socota. Waa amaan bini'aadam, oo ay ku shaqeeyaan shabakada, dhaqaale, wax ku ool ah meelaha ilaa 200 mitir murabac. Qalabka waxaa lagu gartaa wakhti aan xadidneyn oo sax ah, wuxuu awoodaa in uu shaqeeyo maalinta oo idil adoon xirin iyo dib u buuxin. Guryihiisa:
Awood: 6 watts / saacadood;
Tirada kulaylka: 25.5 ± 2.5 kHz;
Awoodda hirarka electromagnetic: in ka badan 900 Vp-p;
Heerka sare: 90-100 dB.
Kadib marka la gaaro natiijooyinka cayayaanka la rabo, waxaa lagula talinayaa inaadan xirin qalabka muddo gaaban.
Riddex Quud 2 oo 1aad. Ku habboon guryaha, guryaha, xafiisyada, bakhaarada, meelaha dukaamada, iwm. Qalabku wuxuu isticmaalaa ugu yaraan korontada, si fudud loo shaqeeyo, uma baahna daryeel gaar ah. Dhaqangalinta dhulka ilaa 200 mitir oo laba jibbaaran. M. Waxay shaqeyn kartaa, iyada oo aan lumin sifooyinka farsamada, heerkul ka ah - 30 illaa 45 digrii. Awoodda cutubka waa 4 W, xaddiga garaaca ayaa ah 0.8-1.0 Hz.
Ultrasonic jadeecada jiirka iyo jiirka ayaa sameeya adiga
Haddii aad aqoon u leedahay barta interneetka raadiyaha, waxaad isku dayi kartaa in aad qalab ku sameyso gacmahaaga.
Marka hore waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u barto habka ugu fudud ee qalabka:
Nidaamka la soo bandhigay, "qalbi" qalabku waa siman midab kala duwan, oo lagama maarmaan ah in la soo ururiyo waxyaabaha ka kooban R7, R5, C6, C5, DD1.3 iyo DD1.4 adoo isticmaalaya bir birta leh.
Calaamadaha koronto-dhaliyaha waxaa si madax-bannaan loogu hagaajin karaa, iyada oo la maareynayo koronto-dhaliyaha: laga bilaabo 25 ilaa 50 kHz. Laga soo bilaabo soo saaraha koronto-dhaliyaha, waxay calaamad u socotaa kor u qaadida awooda, ka dibna loo gudbiyo dhawaaqyada Sp1.
Si loo xisaabiyo soo noqnoqoshada isticmaalka vibrators iyadoo la adeegsanayo xisaabaadka soo socda: 1 / (R5xC6 + R7xC5), halkaasoo awoodda awoodda loo leeyahay awoodda loo yaqaan 'Farad', iyo iska caabinta maskaxda - Oms.
Dabcan, shirarka qalabka leh ee gacmahooda waxay ku kici doonaan laba ama saddex jeer raqiis, laakiin waxay u baahan doontaa xirfad yar, aqoonta qaarkeed iyo sabir weyn. Waxay u egtahay in aad adigu iska leedahay adiguba adiguba adigaa sameeya. Iyadoo la macaamilayo dhamaan murugada isticmaalka hal qalab ama mid kale, waxaad si sahlan u dooran kartaa ugu waxtarka badan. Haddii aadan ku guuleysan inaad doorato cabsida dukaanka, waxaad mar walba naftaada dhisi kartaa.
Waxaad ogtahay, waxaan maqlay wax badan oo ku saabsan repellers kuwan, iyo waxaa jira wax badan oo xun iyo wanaagsan. Malaha, kuwaas oo aan ku qanacsaneyn kuwaas ama nasiib xumada sidaa daraadeed, ama u adeegso qalad. Waxaan soo iibsanay nacasiga eco sannadkii hore, illaa hadda ma jiro jiirarka guriga. Haa, inkastoo xitaa ultrasound uusan ku dhaafin derbiyada, laakiin waxa hortaagan isticmaalka kale ee qolalka kala duwan, inkastoo aan soo iibsanay dhowr jeer isla markaana meelaynay markii loo baahdo. Qiimuhu waa mid la aqbali karo, waad awoodi kartaa. Iyo xitaa intaa ka badan oo lacagta ah oo aadan iibsan karin dareemayaasha in la qaato marka jiirarka ka orday hareeraha guriga.
Waxaan u maleynayaa inay jiraan cabsiyo kala duwan, shaqo qaar, qaarna maaha. Marka hore waxaan qaadnay Grad A-550UZ, ka dibna waxa loo soo jeestay in aan soo dirno been abuur ah (qaylo-dheelyo been ah), si adag ayaan u badali karnaa. Kadibna waxay ku qaadeen qaab isku mid ah dukaan kale - wax walba way shaqeeyaan. No majaajilad xun, wuxuu u shaqeeyaa gabi ahaanba aamusnaan iyo si fiican ufadhiyo qashinka jiirka. Habeenkii, oo ku shaqeynaya batariyaal, iyo inta lagu jiro maalinta waxaan u leenahay shabakadda.
Xakamee Ultrasonic - tani waa furiin ka xumaaday jiilka tobnaad. waxaa jira xitaa qoraalo darsi ah oo ku saabsan internetka oo ku saabsan sida ay u shaqeeyaan, iyo awoowe ayaa dhammaantood la hayaa. haddii aan ku noolaan jiray jiirka, waxaan ka dhigi lahaa deriska oo si deg deg ah uga soo jeeda beelaha ama deriskeyga ku dhejin lahaa nidaamka korontada sida APC OZDU-M guriga dhexdiisa, laakiin waxaan hubaal ahaan lahaa in aan lacag ku tuurin tweeters ultrasonic. By habka, shan iyo toban sano ka hor, waxay si weyn u xayeysiisay mashiinada gacanta lagu dhaqdo sidaas oo kale ultrasound. meelo ay tagaan ...